Bankiga Adduunka oo $40 milyan Soomaaliya u ansixiyay si ay ula dirirto ayaxa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBankiga Adduunka oo $40 milyan Soomaaliya u ansixiyay si ay ula dirirto ayaxa
June 30, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Dooxo ayax uu ku habsaday gudaha Soomaaliya. [Isha Sawirka: Reuters]
Washington-(Puntland Mirror) Bankiga Adduunka ayaa $40 milyan u ansixiyay Soomaaliya si ay uga caawiso dagaalka ka dhanka ah ayaxa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay deyn-bxiyaha maanta oo Talaado ah.
“Ayaxa ayaa si daran u saameeyay hab-nololeedka ku dhawaad 2.6 milyan oo kunool afartan iyo saddex degmo oo kuyaala gudaha Soomaaliya. Waaxda beeraha ayaa laf dhabar u ah dhaqaalaha waxayna ku kacdaa qiyaastii 75 boqolkiiba GDP.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Horaantii bishii Febaraayo 2020, Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in ayaxa uu noqday xaalad deg-deg oo qaran markii ugu horeysay rubuc qarni. Waxayna sheegtay in uu khatar weyn ku yahay xaalada cunada dalka oo horeyba u liidatay.
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Member of Parliament, Mohamed Farah Adan “Canjeex” who was detained by Somaliland forces, was freed on Sunday, official said Puntland MP who told Puntland Mirror has confirmed the release of the Canjeex, [...]